Zvese zvaunoda kuti uzive kugamuchira Apple Bhadhara mune rako bhizinesi | IPhone nhau
Maitiro ekugamuchira Apple Bhadhara mubhizinesi rako
Nacho Aragonés | | Apple Pay, Zvidzidzo uye zvinyorwa
Apple Bhadhara, iyo yekubhadhara system contactless Apple yauya kuzogara. Ikozvino yave kuwanikwa mumabhanga makuru muSpain, uchifungidzira nzira yakasununguka yekubhadhara.
Kujairira Apple Pay, muchokwadi, kwakanyanya kugadzikana kune vashandisi pane kumabhizinesi, pamwe nekuda kwekushayikwa kwezivo iriko. Nhasi ndinoda kuvhenekera imwe Apple Pay kubva kune mutengesi maonero.
1 Tarisa iyo POS
2 Tchaja kutenga neApple Pay
3 Dzosera kutenga neApple Pay
4 Shambadza kuti unogamuchira Apple Kubhadhara
5 Chekupedzisira, dzidzisa mashandisiro eApple Pay
Tarisa iyo POS
Chinhu chekutanga chekuita kutarisa kuti iyo POS (dhatafoni) yebhizinesi rako inoenderana nemari dzekubata. MuSpain, zviteshi zvePOS zvinowanzo kuve zvisingabatanidzwe uye zvinouya zvakagadziriswa nekutadza kuzvigamuchira.
Zvikasadaro, Taura kubhangi rako kana zvakananga nenhamba yekutsigira inoonekwa paPOS kuti uvandudze kune inoitsigira kana kuti iitwe. Kunyangwe zvakadaro, chinhu chakajairika ndechekuti iyo POS yatinayo inoenderana. Mune ino kesi, iwe watogamuchira Apple Pay kubhizinesi rako.
Kana, nekuda kwechikonzero chero chipi zvacho, iwe uchiri kufanira kubhadhara muzana pakubhadharisa kadhi rega rega, ini ndinokurudzira kushandura kune yakadzika mwero. Nenzira iyi, Iwe hauzove neganhuriro mukushandisa kweApple Pay uye iwe unozopa vatengi vako mukana wekugara vachibhadhara, chero chinhu vasina kutakura mari kana chikwama.
Tchaja kutenga neApple Pay
NaApple Pay isu hatifanirwe kuita chero chinhuKunyanya, purinda kopi yerisiti, kunyangwe vatengi vazhinji - pavanogamuchira ziviso pane iyo iPhone - vachakuudza kuti hazvidiwe. Zvakadaro, sekuona kwauchazoona gare gare, tinofanira kugara tichikupa kopi yacho.
Apple Pay haidi mutengi kuti aise iyo PIN (kwete kunyange kubhadhara mari inodarika € 20), usatombo saina risiti. Uye hatifanirwe kutarisa iyo DNI (kutaura zvazviri, zita racho harioneke pamakadhi eApple Pay), uye hatifanire kukumbira kuti tione kadhi rekunyama kana chero rimwe gwaro. Tinofanira kuzvijekesa, sebhizinesi, kuti tinoda kuti mubhadharo uve wakasununguka uye uchengeteke, nekuti ndizvo zvavanoda kwatiri, uye neApple Pay, ndizvo.
Dzosera kutenga neApple Pay
Iyi ficha inogona kunge iri iyo isingazivikanwe poindi kune vakawanda. Iko hakuna kadhi nhamba, kana kana kadhi, asi chiitiko chakaitwa neApple Pay chinogona kudzorerwa.
Kubva kuPOS, isu tinosarudza iyo yekudzosa menyu. Izvo zvichatibvunza isu huwandu uye yekutanga oparesheni nhamba. Ndiyo nhamba yakamisikidzwa nePOS pachayo uye, nekuda kweizvi, tichada risiti kana kopi. Kana isu tichiziva kuti muripo wakaitwa riini uye huwandu, zvinokwanisika kudhinda risiti, asi danho iri rinoenderana nemenyu yePOS yega yega.
Waita izvi, zvinotikumbira kuti titambidze kadhi uye pano, zvakapusa, isu tichaunza iyo iPhone sekunge taizobhadhara. Kudzoka kwaizoitwa kare.
Shambadza kuti unogamuchira Apple Kubhadhara
Apple inopa maturusi uye zvinhu zvinodiwa kwatiri kuti tizivise kuti bhizinesi redu rinoenderana neApple Pay. Hazvina kudiwa kuti uzvigamuchire kana kuti kwete, asi zvinogara zvakanaka kuchengetedza bhizinesi redu ruzivo uye, zvirokwazvo, muzviitiko zvakawanda, vatengi vanozotenda kuti vanogona kusvika panzvimbo yedu vasingatyi kusave nemari pamusoro.
Unogona kukumbira Apple kuti ikutumire akasiyana maApple Pay ekunamira zvachose mahara pano. Tinofanira kuzadza fomu uye kubvuma kuti tichaisa zvitambi sekuda kunoita Apple. Kune zvimiti zvePOS, marejista emari uye mahwindo ezvitoro.
Uyewo, tinogona kuita kuti Apple Pay logo ioneke pane peji rebhizinesi reApple Mepu. Iwe unogona kuseta izvi uye kugadzirisa rese ruzivo rwakanangana nebhizinesi rako kubva pano.
Chekupedzisira, dzidzisa mashandisiro eApple Pay
Muzvitoro zvakawanda, kubhadhara nemakadhi asingataure kana nefoni mbozha kunokanganiswa kwete nehunyanzvi, asi nekushaikwa kwezivo kwevashandi. Kufanana nechero ruzivo rwekugadzirwa kwezvinhu, zvese zvinopfuura nepakati pechinhu chitsva nekusaziva zvisati zvave chinhu chinozivikanwa uye chakajairika, zviri kumabhizinesi kuti ave nenguva, kuraira vashandi vavo uye kusaita zvinokanganisa pavanogamuchira kubhadhara munzira dzese dzaanogona .
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Maitiro ekugamuchira Apple Bhadhara mubhizinesi rako
iOS Mogi: pfungwa inoshandura maonero azvino aSiri
Zvese zvinoratidza kuti iyo nyowani iPhone X ichakwira mumutengo uyu 2018